Nhau dzeBhaibheri: Paradhiso Itsva Pasi Pano - Kero Yepamutemo yeIndaneti yeZvapupu zvaJehovha
Tarira miti mirefu iyo, maruva akanakisisa namakomo akakwirira. Ko pano hapana kuisvonaka here? Ona kuti dzoma riri kudya sei muchanza chekakomana. Uye tarira shumba namabhiza amire uko mumafuro. Hauzati waizoda here kugara mumba iri munzvimbo yakadai?
Mwari anoda kuti urarame nokusingaperi pasi pano muparadhiso. Uye haadi kuti uve naapi naapi amarwadzo nezvinorwadza zvinotambura vanhu nhasi. Ichi chipikirwa cheBhaibheri kuna avo vachagara muparadhiso itsva: 'Mwari achava navo. Hakuchazovizve norufu kana kuchema kana marwadzo. Zvinhu zvekare zvapfuura.'
Jesu achatarisira kuti chinjo iyi inoshamisa inoitika. Unoziva kuti riini here? Hungu, abvisa ushati hwose navanhu vakashata papasi. Yeuka, apo Jesu aiva pasi pano akaporesa vanhu pamarudzi ose echirwere, uye akatomutsa vanhu muna vakafa. Jesu akazviita kuratidzira zvaaizoita mupasi rose paaizova Mambo woumambo hwaMwari.
Haiwa imbofunga hako kuti kuchashamisa sei muparadhiso itsva pasi pano! Jesu, pamwe chete navamwe vavaanosarudza, vachave vachibata ushe mudenga. Vabati ushe ava vachatarisira aninaani pasi pano vachiona kuti vanofara. Ngationei chatinodikanirwa kuita kusimbisira kuti Mwari achatipa upenyu husingaperi muparadhiso yake itsva.
Zvakazarurwa 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.
Bhaibheri rinoratidza kuti tichava nemamiriroi ezvinhu muParadhiso yepasi?
Bhaibheri rinopikirei vaya vachagara muParadhiso?
Jesu achaona rini kuti kuchinja kunoshamisa kwaitika?
Jesu paakanga ari pasi pano, akaitei kuratidza zvaaizoita saMambo woUmambo hwaMwari?
Jesu nevaachatonga navo kudenga vachava nechokwadi chei pavanotonga pasi vari kudenga?
Verenga Zvakazarurwa 5:9, 10.
Nei tichigona kuva nechivimbo chokuti vaya vanotonga pasi muKutonga kweMakore Ane Chiuru vachava madzimambo nevaprista vanonzwira tsitsi uye vazere nenyasha? (VaEf. 4:20-24; 1 Pet. 1:7; 3:8; 5:6-10)
Verenga Zvakazarurwa 14:1-3.
Kunyorwa kwezita raBaba nereGwayana pahuma dzevanhu vane 144 000 kunomirirei? (1 VaK. 3:23; 2 Tim. 2:19; Zvak. 3:12)
Umambo hwaMwari Huchaitei?
Ona zvichaitika kana Umambo hwaMwari hwava kutonga pasi pano.